Iincwadi ezisixhenxe zikaSeneca zobulumko, umsebenzi obalulekileyo | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezisixhenxe zikaSeneca zoBulumko
UJuan Ortiz | | Uvavanyo, Ababhali, Iintlobo, Iincwadi, Iincwadi, Ezahlukeneyo
USeneca, umbhali wefilosofi weeNcwadi ezisixhenxe zoBulumko.
ISeneca (4 BC-AD 65) Wayengoyena filosofi waseLatin wayenempembelelo ehlabathini. Umsebenzi walo mbhali, uwonke, lilifa lehlabathi, isikhokelo somoya kuye nabani na osondela ekufundeni.
Inkundla eyaziwayo yaseRoma ijongana nemixholo eqhelekileyo yobomi bemihla ngemihla kwimibhalo yakhe, kodwa ngendlela enzulu kunye nohlalutyo. USeneca wabhala ngobufutshane bobomi, ukufa, kunye nobuthixo bukaThixo, ubuhlwempu kunye nobutyebi, kunye nendlela umntu alubopha ngayo ulonwabo okanye usizi kula mazwe. En Iincwadi ezisixhenxe zobulumko Ukhokela umntu kwiindlela zobomi. Akumangalisi ukuba kufuneka ibandakanywe phakathi ezona ncwadi zibalaseleyo zoncwadi lwaseSpain.
1 Isikhokelo esigqibeleleyo soBomi uqobo
1.1 Incwadi yokuqala
1.2 Incwadi yesibini
1.3 Incwadi yesithathu
1.4 Incwadi yesine
1.5 Incwadi yesihlanu
1.6 Incwadi yesithandathu
1.7 Incwadi yesixhenxe
2 Ilifa likaSeneca
Isikhokelo esigqibeleleyo soBomi uqobo
Kunye Iincwadi ezisixhenxe zobulumko Unokukuva ukudityaniswa kolwazi kunye namava uSeneca akwazi ukufikelela ebomini bakhe. Isishwankathelo, ezi ncwadi zimalunga noku kulandelayo:
Apha Umbhali uhamba nathi ngokubona kwakhe ubuThixo bukaThixo nokulunga kwakhe ebantwini.
Kweli candelo iSeneca Idibanisa into enxulumene nomntu kunye nendlela ekufuneka abuhambise ngayo ubomi bakhe kude nento emenzakalisayo Ubungcwele bakho.
Este Imalunga nendlela yokuzola xa ujongene neengxaki eziqhelekileyo obuza nazo ubomi.
Apha uSeneca ubonakalisa ukuba leliphi elinye lamagalelo akhe abalulekileyo, le ndlela yokufumana ubulumko. Isithandi sobulumko sibonisa kulowo ufundayo ukuba ekuphela kwendlela yokufumana ulwazi oluyinyani yimigudu. Ukuqina kuphela, unyamezelo, kunye nokufundisisa okuyinyani kunika ubulumko bokwenyani.
UNero noSeneca, umfanekiso oqingqiweyo.
Kule ncwadi yenye yezihloko ezigutyungelwe kakhulu ngumntu, yintoni enxulumene nobufutshane kunye nexesha elifutshane lobomi. USeneca wenza umbono ocacileyo wokufa apha.
Kweli candelo uSeneca ujongene nendlela yokujongana nentlungu, Kwaye ifuna ukuqonda ukuba lonke usizi luthunyelwe nguThixo ukuze umntu angajiki kwaye umphefumlo nomoya wakhe womelezwe. Ngokomfilosofi, umntu ngamnye kufuneka, ngoko, akhangele okulungileyo ebubini obumoyikisayo.
Kule ncwadi ifilosofi yenza ingcamango enzulu ngomxholo wentlupheko. USeneca uthi ubuhlwempu bunokuxhasa ukoyisa, kuba busebenzela umntu ukuba azigcwalise ngenkalipho kwaye ajongane nosizi ngokwalo.
Nanamhlanje, kwiminyaka engamawaka amabini kamva, umsebenzi kaSeneca usasebenza kwiindawo ezininzi zehlabathi. Amawakawaka ayamfunda kwaye alandele imiyalelo yakhe kwaye asebenzise ubulumko bakhe ebomini babo. Izicatshulwa zakhe zibonisa ukucinga kwakhe, kwaye ukucinga kwakhe kuyimveliso ethe ngqo yamava akhe obomi.
Kwaye nangona egxekiwe kakhulu kuba ebejongana nayo yonke le micimbi evela kwisikhundla esimi kakuhle kwezoqoqosho, lokanye kuyinyani ukuba usiba nobubanzi nokuphakama kwendlela athe wavakalisa ngayo izimvo zakhe ziyamxhasa. Ngokuqinisekileyo, Iincwadi ezisixhenxe zobulumko es Umsebenzi ofanele ukunikwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Iincwadi ezisixhenxe zikaSeneca zoBulumko
UMiguel de Unamuno, umbhali wembali